फिफा वर्ष खेलाडी प्रमुख दाबेदार भान डाइक !
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलफिफा वर्ष खेलाडी प्रमुख दाबेदार भान डाइक !
एजेन्सी, ६ असोज । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले आज ‘फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड’को घोषणा गर्दैछ । आज राति हुने उक्त अवार्ड घोषणा इटालीको मिलानस्थित टिट्रो अल्ला स्कालामा एक भव्य समारोहकाबीच हुनेछ ।
यस अवार्डका लागि पहिलो चरणमा छनोट भएका १० खेलाडीबाट फिफाले अन्तिम तीन जनालाई छानेको छ । बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी, युभेन्टसका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लिभरपुलका स्टार भर्जि भान डाइक परेका छन् । यी तीनमध्येबाट पब्लिक भोटिङ र प्रदर्शन मुल्याङकनका आधारमा वर्ष खेलाडी छनोट गरिने छ ।
तर, यस अवार्डका लागि प्रमुख दाबेदार भने युरोपियन च्याम्पियन्स लिभरपुलका डिफेन्डर भर्जिल भान डाइक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । स्पेनिस मिडिया ‘एएस’का अनुसार यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधि विजेता डाइले मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछार्दै उक्त अवार्ड जित्नेछन् ।
भान डाइकले आफ्नो राष्ट्र नेदरल्याण्ड्सलाई यूईएफए नेशन्स कपको फाइनलसम्म पुर्याएका थिए । यस्तै उनले यसअघि नै स्टार खेलाडीद्वय मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछार्दै यूईएफए वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका थिए । सन् २०१८ मा मात्र साउथह्याम्पटनबाट लिभरपुल आएका उनले क्लब आएयता नै लिभरपुललाई प्रिमियर लिगको उपविजेता बनाएका थिए ।
यस अवार्डका दौडमा रहेका युभेन्टसका स्टार रोनाल्डोले भने आफ्नो क्लबलाई २ वटा उपाधि दिलाएका छन् भने पोर्चुगललाई नेशन्स लिगको उपाधि दिलाएका छन् । यता, अर्का प्रतिस्पर्धी मेस्सीले भने बार्सिलोनालाई ला लिगाको उपाधि दिलाएका छन् । मेस्सी अघिल्लो सिजनको च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन् ।